यूहन्ना २ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
२ अब त्यसको तेस्रो दिन गालीलको कानामा विवाह-भोज थियो अनि येशूकी आमा पनि त्यहाँ गएकी थिइन्‌। २ येशू र उहाँका चेलाहरूलाई पनि त्यो विवाह-भोजमा निम्त्याइएको थियो। ३ दाखमद्य* सिद्धिनै लाग्दा येशूकी आमाले उहाँलाई भनिन्‌: “तिनीहरूसित दाखमद्य छैन।” ४ तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “ए नारी, तिमीसित मेरो के सरोकार?* मेरो बेला अझै आइपुगेको छैन।” ५ उहाँकी आमाले त्यहाँ सेवा गरिरहेकाहरूलाई भनिन्‌: “उहाँले तिमीहरूलाई जसो भन्नुहुन्छ, त्यसै गर।” ६ त्यहाँ ढुङ्गाका छ वटा घ्याम्पा थिए, जुन यहूदीहरूको शुद्धीकरणसम्बन्धी रीतिअनुसार आवश्यक थियो। हरेक घ्याम्पोमा चवालीस वा छैसट्ठी लिटरजति* पानी अटाउँथ्यो। ७ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “घ्याम्पाहरूमा पानी भर।” अनि तिनीहरूले घ्याम्पाको मुखसम्मै भरे। ८ अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “अब अलिकता उघाएर भोजका प्रबन्धककहाँ लैजाओ।” तब तिनीहरूले त्यो लगे। ९ अनि भोजका प्रबन्धकले दाखमद्यमा परिणत भएको पानी चाखे। त्यो कहाँबाट आयो भनेर तिनलाई थाह थिएन तर त्यहाँ सेवा गरिरहेकाहरू जसले पानी उघाएका थिए, तिनीहरूलाई चाहिं थाह थियो। त्यसैले भोजका प्रबन्धकले दुलहालाई बोलाए १० र तिनलाई भने: “हरेक मानिसले पहिला असल दाखमद्य टक्राउँछ अनि जब मानिसहरू मात्तिसकेका हुन्छन्‌, तब कमसलचाहिं टक्राउँछ। तर तिमीले त असल दाखमद्य अहिलेसम्म जोगाइराखेका रहेछौ।” ११ यसरी येशूले गालीलको कानामा पहिलो चमत्कार गरेर आफ्नो शक्ति प्रकट गर्नुभयो; अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे। १२ त्यसपछि उहाँ आफ्नी आमा, भाइहरू र चेलाहरूसित कफर्नहुम ओर्लनुभयो तर त्यहाँ धेरै दिन बस्नुभएन। १३ अब यहूदीहरूको निस्तार-चाड नजिकै थियो र येशू यरूशलेम उक्लनुभयो। १४ अनि उहाँले मन्दिरमा गाईवस्तु, भेडा र ढुकुर बेच्नेहरू अनि सराफीहरूलाई आ-आफ्नो कुर्सीमा बसिरहेका भेट्टाउनुभयो। १५ तब डोरीको कोर्रा बनाएर उहाँले तिनीहरू सबैलाई तिनीहरूका भेडा र गाईवस्तुको साथमा मन्दिरबाट लघार्नुभयो अनि पैसा साट्नेहरूको सिक्का छरपस्ट पारिदिनुभयो र तिनीहरूको टेबुल पल्टाइदिनुभयो। १६ अनि ढुकुर बेच्नेहरूलाई उहाँले भन्नुभयो: “यी सब यहाँबाट लगिहाल! मेरो बुबाको घरलाई व्यापारको थलो बनाउन छोड!” १७ तब पहिल्यै लेखिएको यो कुरा चेलाहरूले सम्झे: “तपाईंको घरको लागि मेरो जोसले मलाई खानेछ।” १८ यो देखेर यहूदीहरूले उहाँलाई भने: “तपाईंले यस्ता-यस्ता कामहरू गरिरहनुभएको छ, अब हामीलाई चाहिं के चमत्कार देखाउनुहुन्छ नि?” १९ तब येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: “यो मन्दिर भत्काओ अनि तीन दिनमा म यसलाई फेरि खडा गर्नेछु।” २० यो सुनेर यहूदीहरूले भने: “यो मन्दिर बनाउन छयालीस वर्ष लाग्यो तर के तपाईंचाहिं यसलाई तीन दिनमा खडा गर्नुहुनेछ?” २१ तर उहाँले जुन मन्दिरको विषयमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो उहाँको शरीर थियो। २२ अनि जब उहाँ मृत्युबाट ब्यूँताइनुभयो, तब उहाँले भन्ने गर्नुभएको यो कुरा चेलाहरूले सम्झे; अनि तिनीहरूले धर्मशास्त्रमा र येशूले भन्नुभएको कुरामा विश्वास गरे। २३ तथापि, जब उहाँ निस्तार-चाडको बेला यरूशलेममा हुनुहुन्थ्यो, तब उहाँले गरिरहनुभएका चमत्कारहरू देखेर धेरै जनाले उहाँको नाममा विश्वास गरे। २४ तर येशूले तिनीहरूलाई भरोसा गर्नुभएन, किनभने उहाँ तिनीहरू सबैलाई चिन्नुहुन्थ्यो २५ र मानिसको बारेमा कसैले उहाँलाई बताइरहनु आवश्यक थिएन, किनकि मानिसको मनमा के छ, उहाँ आफै जान्नुहुन्थ्यो।
^ यूह २:३ * वा, “अङ्गुरबाट बनेको मद्य।”
^ यूह २:४ * मत्ती ८:२९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ यूह २:६ * वा, “दुई वा तीन बाथ।”